कसले कपटी छ
कपटी गर्ने हो? एक नाटकीय उत्पादन लागि आफ्ना भावनाहरूलाई मा छवि संग मास्क परिवर्तन भएका प्राचीन रोम तथाकथित कलाकारहरूको दिन। आज, बाहिरबाट भावना देखाउन गर्ने तथाकथित मान्छे, आफ्नो वास्तविक भावना अनुरूप छैन। अक्सर यो छ disingenuous व्यवहार अन्य पार्टीको लागि घृणा संग संयुक्त छ। तसर्थ, शब्द "कपटी", मूल पूर्व तटस्थ हालतमा "अभिनेता" वा "अभिनेता", आज मनोवैज्ञानिक अवधि छ।
तर अर्थ विज्ञान मा यस्तो पारी लामो समय पहिले भयो। उदाहरणका लागि, पारंपरिक जो चर्च मग emote भक्ति मा alms राख्दछ इच्छुक टाउको र ठूलो मोती, संग फिक्का र पातलो महिलाहरु रूपमा चित्रण गरिएको मध्ययुगीन कपट देखि तस्वीर को एक। तर, महिलाको खुट्टा देखिने ब्वाँसो को स्कर्ट अन्तर्गत।
कपट को कारण
कपटी के हो बुझ्न प्रयास मा, हामी यो असम्भव छ भनेर सम्झना हुनुपर्छ यो न्याय गर्न गुणस्तर वा त्यस्तो व्यवहार मानिसहरूलाई जोगिन। नियम, भावना को duality एक प्रकटीकरण केहि गलत लुकाउने छैन। आखिर, हामी प्रत्येक जीवन अवस्था साँचो भावना गलत मुस्कान पछि लुकाउन थियो जहाँ मा गरिएको छ। यो कारण धेरै हुन सक्छ। तर अक्सर यो stigma र गलतफहमीले, अरूले स्वीकार हुँदैन डर भय छ।
अक्सर मानिसहरू निष्कपट भावना को प्रकटीकरण तिनीहरूलाई कमजोर बनाउँछ भन्ने विश्वास गर्छन्। तसर्थ, सुरक्षा प्रविधी, एक जो विभिन्न प्रयोग - कपट। यो डर लागि मुख्य कारण - कम आत्म-सम्मान। मानिसहरू आफू, पर्याप्त स्मार्ट आकर्षक योग्य विचार गर्दा, तिनीहरू "मास्क मोड" समावेश अग्रिम। यो विधि लगभग सबै मान्छे को लागि विशिष्ट छ। त्यसैले तपाईं कपटी, त्यसपछि, सम्भवत, उनले असुरक्षित महसुस अन्य व्यक्ति भने भनेर बुझ्न पर्छ।
कसरी कपट गर्न प्रतिक्रिया गर्न
कपटी गर्ने हो? व्यक्ति insincerely व्यवहार भने कसरी व्यवहार गर्ने? भावना र खराब मुड को प्रकटीकरण मा insincerity भिन्नता बुझ्न पहिलो कुरा। हुन्छ, मान्छे, अन्य व्यक्ति तिनीहरूलाई धोखा छ भन्ठानेर अप घोटाले, शिकायत र दावा व्यक्त रोल। तर कोसँग व्यक्ति तपाईं सञ्चार हो भने, तपाईंले प्रेम, तपाईंले तीन कदम पालना गर्न आवश्यक:
उहाँले तपाईं धोखा छ कि छैन र कुनै पनि कारण लागि सुरक्षित स्वीकार्छन्;
तपाईं अन्य व्यक्ति कमजोर महसुस गर्ने, यो गरेका भनेर बुझ्न प्रयास;
आफ्नो व्यवहार परिवर्तन वा बस व्यक्ति मा दबाव राख्न बन्द।
यसलाई उल्लेख गर्नुपर्छ जस्तै कि कार्यहरू मात्र तपाईं साँच्चै सम्बन्ध सुधार गर्न चाहनुहुन्छ भने प्रभावकारी हुनेछ।
जो आफ्नो अभियुक्तहरुलाई दोषी मा कपटी छ
निरन्तर बाह्य कार्यहरू मा insincerity exhibiting दुई-सामना कपटी, - कपटी छ। यी मानिसहरूलाई भेट तपाईं संचार को आनन्द ल्याउन छैन। को सजग र अवचेतन: तिनीहरूलाई यसलाई किनभने प्रसारण र जानकारी को स्वागत को प्रक्रिया मा, धेरै गाह्रो कुराकानी गर्न छ, दुई स्तर सामान्यतया संलग्न। पूर्ण बिभिन्न - मन एक जानकारी प्राप्त, र अवचेतन मनमा कि र यो बाहिर जान्छ। एक प्रयास मा असंगत कुराहरू एक व्यक्ति एक टाउको दुखाइ हुन्छ संयोजन गर्न। तर तिनीहरू कपटीहरू आफ्नो duplicity ग्रस्त निरंतर लगाएका "मास्क" अक्सर एक निम्त्याउँछ रूपमा छन् विभाजित व्यक्तित्व सबै उसपछि नतिजा संग। के तपाईं साँच्चै जो आफैलाई स्वीकार र प्रेम कसरी सिक्न। भवदीय आफ्नो भावना र चाहना व्यक्त। आफ्नो व्यक्तित्व, आदर र "मास्क" पछि लुकाउन।
मेरो श्रीमानको बहिनी श्रीमान् हुनुहुन्छ? परिवार वर्गीकरणका पोख्त
आइरिस आधुनिक नृत्य: विवरण, इतिहास र आन्दोलन
जहाँ लिन उपहार सान्टा क्लाउस, वा सँगै मनन गर्न!
दयालु - यो के हो? "सौजन्य", "प्यारा" र शिष्टाचार
"वाइनरी" (मास्को) - समकालीन कला लागि प्रचलनमा केन्द्र
Gargoyle - एक सर्प drakonovidnoy को रूप मा वास्तुकला को एक तत्व
जापानमा एक समुराई महिला। प्रसिद्ध अन्ना-बगुवाईसी
को हिज्जे कसरी सही हटाउन सिक्न
विशेषज्ञहरु unambiguous मूल्यांकन Klatsid प्रभावकारी दिन
Urbech: लाभ र हानि। उपयोगी गुण र contraindications
सरल कदम: कसरी विगतका जीवन सम्झन गर्न
सेतो रक्सी - Gourmets लागि पेय